Izinzuzo zamafutha we-argan - i-AFRIKHEPRI FOUNDATION
NgoLwesithathu 13 Novemba, 2019
Buka Kufakiwe Angiyona Yakho Negro (2017)
Buka i-Amazing Grace (i-2019)
I-Congo yakha idamu elikhulu kunawo wonke lamanzi emhlabeni wonke
Ithuba lesibili - uRobert Kiyosaki (Umsindo)
Umsuka womoya wenkolo
Izinzuzo zamafutha we-argan
By I-AFRIKHEPRI FOUNDATION ngo-Septhemba 14, 2019
Sebenzelwe amakhulu eminyaka abesifazane baseBergber ukuba bavuselele isikhumba sabo, baqinise izinwele zabo futhi bazivikele bevela elangeni nasemoyeni, amafutha e-argan kancane kancane abe yindawo phakathi kwezimonyo zaseWestern.
I-omega-6 ebalulekile amafutha acids, i-vitamin E ne-polyphenols, i-argan amafutha agcwele amaphuzu amaningi okuphuza amanzi, aphikisayo futhi avuselelayo. Ucwaningo oluqhutshwa eMorocco naseYurophu luqinisekisile ukuthi lusebenza ngokumelene nokomile nokuguga kwesikhumba (anti-wrinkles) ngokubuyisela ifilimu ye-hydrolipidic futhi kwandise ukunikezwa kwezakhi zamaseli.
Esikhathini samasiko aseMoroccan pharmacopoeia, amafutha e-argan asetshenziselwa ukunakekelwa komzimba ukuvimbela imiphumela eyingozi yokudala nesimo sezulu kanye nokwelapha ukucasuka kwesikhumba njenge-acne, i-eczema, isikhumba esikhuphukile. owesifazane okhulelwe, ukushisa, ukushisa ilanga, i-psoriasis kanye nenkukhu. Abagijimi bayayisebenzisa ukuze kukhululwe ubuhlungu besisu.
I-Schotténol equkethwe kumafutha we-argan nawo anezakhiwo ze-anticarcinogenic. Ngendlela yayo yokudla, kunganciphisa i-cholesterol embi ne-hypertension.
Ngesikhumba esithambile nesiqu
Amafutha we-argan yemifino asetshenziswa kokubili ukusikhipha okulula ebusweni nasesicelo sendawo ezindaweni ezomile kakhulu zomzimba. It humid, revitalizes, ithobisa isikhumba futhi ivikeleke ekumeni. Isenzo salo sikhipha ukuphahlazeka nokuqhekeka okubangelwa ubusika obandayo, umoya noma usawoti futhi kusiza ukuvimbela imibimbi. Amafutha e-Argan ahlanza isikhumba se-acne futhi asishiya ekhanyayo futhi ekhazimulayo. Amandla ayo aqinile enza izimangaliso uma ukulahlekelwa isikhumba ukuqina.
Faka amafutha e-argan ebusweni nasentanyeni ukuze isikhumba silungiswe ngesikhumba esincane; ukuphunga ngokucophelela ekuhambeni kwesiyingi ukuze wenze ukungena; ake ume imizuzu ye-15, bese ususa amafutha amaningi ngokwe-swab ikotini ehambelana namanzi e-orange or blossom. Ukwelashwa kushiya isikhumba se-hydrated futhi senziwe lula.
Amafutha e-Argan anciphisa ubuhlungu obuhlangene futhi athandwa kakhulu ekuzicwiliseni umzimba. It isetshenziswa njengawo wonke amanye amafutha massage futhi ingaba mnandi. Vele uhlanganise amaconsi ambalwa wamafutha abalulekile ozikhethelayo. Ngesikhathi esifanayo, ezinye izakhiwo zengeziwe.
Amafutha e-Argan aqinisa isikhumba, akhanyela izinwele ngenkathi ebuyisela ukunethezeka kwayo kwemvelo kanye nobumnyama.Kunconywa ukuthi isetshenziswe ukulwa nokukhwabanisa noma ukulahlekelwa izinwele.
Ukuze ubuyisele amandla ebusweni obuthakathaka, sebenzisa amafutha we-argan kusuka empandeni kuya kusipho; ngobumnene shayela izinwele ukuze usakaze umkhiqizo; Ukugoqa izinwele ethawula elifudumele bese uma imizuzu eyi-20; geza nge shampoo yakho evamile bese ugeza. Isikhathi sokuphumula singancishiswa ngokushisa izinwele ezigcinwe ethawula ngesomiso.
Ukuze uvikele izinwele emiphumeleni ye-desiccant ye-sunbathing noma i-sea ne-chlorine, sebenzisa i-oil hair styling ngokusebenzisa i-touch of brush noma inani elincani lamafutha we-argan ku-hairbrush ngaphambi kokuba udwebe.
Uqinisa izipikili ezinamahloni
Njengesikhumba, izipikili zonakalisiwe, zome futhi ziphule ngamakhaza, amanzi, ama-detergents, njll. Amafutha e-Argan angasiza ekuwondleni nasekuqiniseni.
Kanye ngesonto, izinyosi zihlanjululwe futhi ezingenayo ezingamaminithi angu-20 enhlanganeni yezingxenye ezilinganayo ilamula lelamula kanye ne-argan amafutha, bese ugeza izandla zakho nge-soap emnene. Uma izipikili zihlambalaza, phinda umsebenzi nsuku zonke. Ukulungiselela kungasetshenziswa kabusha; Vele usithulule ebhodleleni elihlanzekile, elomile bese uhlala isonto. Ukuze uthole ukwelashwa okujulile, fudumala ingxube ku-bain-marie.
Ukuze senze izipikili zibe mhlophe, sidlula ucezu lwekotini oluthambile emaconsi ambalwa emanisi kalamula kanye namanzi e-orange.
Usuke usabela "Izinzuzo zamafutha e-argan" Imizuzwana embalwa edlule